तीव्र छवि वायरलेस Earbuds प्रयोगकर्ता मैन्युअल [XO-9656-2] - म्यानुअल
प्रयोगकर्ता म्यानुअल सरलीकृत।
तीव्र छवि वायरलेस Earbuds प्रयोगकर्ता म्यानुअल [XO-9656-2]
अक्टोबर 18, 2020 अक्टोबर 18, 2020
13 टिप्पणिहरु तीव्र छवि वायरलेस Earbuds प्रयोगकर्ता मैन्युअल [XO-9656-2] मा
घर » तीव्र छवि » तीव्र छवि वायरलेस Earbuds प्रयोगकर्ता म्यानुअल [XO-9656-2]
तीव्र छवि साँचो वायरलेस Earbuds
तपाईंले सुरु गर्नु अघि ...
सुरक्षित र उचित प्रयोग सुनिश्चित गर्न, उपकरण प्रयोग गर्नु अघि सबै सुरक्षा जानकारी पढ्नुहोस्। केवल निर्माता-अनुमोदित ब्याट्री, चार्जर, सामान, र आपूर्तिको साथ प्रयोग गर्नुहोस्।
यो उपकरण कुनै खेलौना होईन, बच्चाहरू वा घरपालुवा जनावरहरूलाई यो उपकरणको साथ प्रयोग गर्न वा खेल्न अनुमति नदिनुहोस्।
उपकरण विभाजन, परिमार्जन, वा मर्मत नगर्नुहोस्।
कम ब्याट्रीले खराब ब्लुटुथ जडान वा ध्वनि विकृति निम्त्याउन सक्छ।
ब्याट्रिक चार्ज नगर्नुहोस्।
एकाईलाई चरम तापक्रम (तातो वा चिसो), खुला आगो, आर्द्रता, वा गीला अवस्थाहरूमा पर्दाफास नगर्नुहोस्।
युएसबी पोर्टहरू, पावर ज्याक वा उपकरणको अन्य इनपुटहरू धुलो वा पानीमा पर्न नदिनुहोस्, वा कुनै पनि प्रवाहकीय सामग्रीहरू जस्तै तरल पदार्थ, धातु पाउडर, आदिको सम्पर्कमा आउनुहोस्।
ब्याट्री जीवन जानकारी
फेब्रुअरी २०१ in मा दक्षिणी टेलिकमद्वारा गरिएको परीक्षणले पत्ता लगायो कि यी ईयरबडहरू, प्रायः फोनसँग जोडा बनाइएको, volume०% सेट गरिएको, करीव hours घण्टा संगीत र २ घण्टा कुरा गर्ने समयसम्म चलेको थियो। यो परीक्षण इयरबडहरूको पूर्ण चार्ज सेटको साथ गरिएको थियो। पूर्ण रूपमा खाली ब्याट्रीको लागि प्रयोग गरियो। ब्याट्री जीवन उपकरण सेटिंग्स, वातावरणीय र अन्य कारकको साथ भिन्न हुनेछ।
प्रश्न र ग्राहक समर्थन
प्रश्न, समस्या निवारण वा कुनै अन्य मद्दतको लागि, कृपया साउदर्न टेलिकम.कममा हाम्रो वेबसाइटको भ्रमण गर्नुहोस् र उत्पादन समर्थनमा क्लिक गर्नुहोस्।
STBT303 - सत्य वायरलेस Earbuds प्लस (xl)
चार्ज केस (x1)
USB चार्जिंग केबल (xl)
प्रयोगकर्ता म्यानुअल (x1)
केस चार्ज गर्दै केसको तल्लो भागमा USB हर्जिंग पोर्टमा आपूर्ति गरिएको USB चार्जिंग केबलको सानो कनेक्टर प्लग गर्नुहोस्। कम्प्युटर, USB चार्जिंग उपकरण, वा VV USB एडाप्टर (समावेश नगरिएको) मा USB पोर्टमा ठूलो कनेक्टर प्लग गर्नुहोस् र भित्ता सकेटमा प्लग गर्नुहोस्।
केसको तल्लोमा रहेको एलईडी सूचक केस चार्ज हुँदै गर्दा RED फ्ल्यास हुनेछ, र केस पूर्ण चार्ज हुँदा ठोस RED परिवर्तन हुनेछ।
Earbuds चार्ज गर्दै
चार्जिंग केसको ढक्कन खोल्नुहोस् र ईयरबड्सलाई केसको इयरबड चार्ज पोर्टमा स्लाइड गर्नुहोस्। ईयरबडहरू स्वचालित रूपमा चार्ज हुन सुरू हुनेछ। इयरबड्सको एलईडी संकेतकहरू ठोस आरईडी हुन्छ जब तिनीहरू चार्ज हुँदैछन् र जब तिनीहरू पूर्ण चार्ज हुन्छ बन्द हुन्छ।
NOTE: जब ईयरबड्स पावरमा कम छन्, तब आवाज सुन्न सकिन्छ जुन उनीहरूलाई चार्ज गर्न आवश्यक पर्दछ।
पावर अन / अफ
ईयरबडहरू अन गर्न पावर केसबाट ईयरबडहरू हटाउनुहोस्।
दुबै ईयरबडहरू १ मिल्थ बटनहरू Press 1 सेकेन्डका लागि थिच्नुहोस् प्रेस गर्नुहोस् म्यानुअल रूपमा ईयरबडहरू अन गर्नका लागि।
इयरबड्सलाई चार्जिंग केसमा घुसाउनुहोस् स्वचालित रूपमा तिनीहरूको शक्ति बन्द र चार्ज सुरू गर्नुहोस्।
Earbuds जोडी गर्दै
इयरबडहरू पावर गर्नुहोस् तिनीहरूलाई चार्जिंग केसबाट हटाएर वा [मल्टि] बटन थिचेर र होल्ड गरेर।
एक क्षण पछि, एउटा आवाज सुन्न सकिन्छ, जसले यो दर्शाउँछ कि २ ईयरबडहरू एक अर्कामा जडित छन्। एउटा ईयरबड रेड र निलो फ्लैश गर्दछ, अन्य बीच-बीचमा ब्लू फ्ल्यास गर्दछ।
तपाईंको उपकरणमा ब्लुटुथ सक्षम गर्नुहोस् र तपाईंको उपकरणको ब्लुटुथ मेनूमा जानुहोस्, चयन गर्नुहोस् STBT303 जब यो देखा पर्दछ।
एकचोटि तपाईको उपकरणमा सफलतापूर्वक पेयर गरेपछि, आवाज सुन्न सकिन्छ र दुबै ईयरबड्स बीच-बीचमा ब्लु फ्ल्याश हुनेछ।
प्लेब्याक समायोजन गर्दै
एकचोटि तपाईंले ईयरबडमा पेयर गर्नुभयो, तपाईं प्लेब्याक र भोल्युम समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको जोडा बनाइएको उपकरणमा नियन्त्रणहरू, वा तल ईयरबड नियन्त्रणको साथ।
पज गर्न या त [मल्टि] बटन थिच्नुहोस्। पुनःसुरु गर्न पुनः थिच्नुहोस्।
अर्को ट्र्याकमा स्किप गर्न दायाँ ईयरबडमा [मल्टि] बटन दुई पटक थिच्नुहोस्।
अघिल्लो ट्र्याकमा स्किप गर्न बाँया ईयरबडमा [मल्टि] बटन दुई पटक थिच्नुहोस्।
आवाज सहायक सक्रिय गर्दै
आवाज सहायक सक्रिय गर्नको लागि, TW5 ईयरबड्स M को एक उपकरण बनाउनु पर्छ जोसँग एक आवाज सहायक छ, जस्तै SW वा गुगल सहायक। भ्वाइस सहायकको प्रयोगमा आमाको लागि कृपया उनीहरूका लागि शिक्षण सामग्री अनलाइन परामर्श लिनुहोस्। • device सेकेन्ड [मल्टि] बटन थिच्नुहोस् र होल्ड गर्नुहोस् तपाईको उपकरणको आवाज सहायक प्रकार्य सक्रिय गर्नका लागि।
या त [मल्टि] बटन थिच्नुहोस् आगमन कललाई जवाफ दिन
या त [मल्टि] बटन थिच्नुहोस् कल समाप्त गर्नका लागि।
या त [Double] बटन थिच्नुहोस् आगमन कल अस्वीकार गर्न।
कुनै परिवर्तन वा संशोधन स्पष्ट रूपमा जिम्मेवार पार्टी द्वारा अनुमोदित छैन
अनुपालनको लागि उपकरण सञ्चालन गर्न प्रयोगकर्ताको अधिकार खेर गयो। यो उपकरण FCC नियमको भाग १ with को पालना गर्दछ। अपरेशन निम्नलिखित दुई सर्तहरूको विषय हो:
(१) यो उपकरणले हानिकारक हस्तक्षेपको कारण हुन सक्दैन, र
(२) यस उपकरणले प्राप्त गरेको कुनै हस्तक्षेप स्वीकार गर्नुपर्दछ, हस्तक्षेप सहित अनावश्यक अपरेशनको कारण हुन सक्छ।
ट्रेडमार्क शार्पर छवि द्वारा स्वामित्व
तपाईंको पुस्तिकाको बारेमा प्रश्नहरू? टिप्पणीहरूमा पोस्ट गर्नुहोस्!
तीव्र छवि साँचो वायरलेस Earbuds उपयोगकर्ता पुस्तिका सत्य वायरलेस ईरबड्सको तपाइँको खरीदमा फ्रन्ट कONG्ग्रेट्युलेसनहरू ....
चार्जर छवि सत्य वायरलेस Earbuds चार्जिंग केस STBT101 उपयोगकर्ता पुस्तिकाको साथ SHARPER छवि साँचो वायरलेस Earbuds चार्जिंग केस उपयोगकर्ता पुस्तिकाको साथ ...
तीव्र छवि वायरलेस पेय हीटर / कूलर निर्देशन उपयोगकर्ता पुस्तिका आइटम नम्बर २० 207196 XNUMX XNUMX Shar शार्पर छवि खरीदका लागि धन्यबाद ...
तीव्र छवि स्वचालित Clapping वायरलेस कार चार्जर २० 207670० उपयोगकर्ता पुस्तिका आइटम नम्बर २० 207670 XNUMX XNUMX Shar शार्पर छवि खरीदका लागि धन्यबाद ...
Essos साँचो वायरलेस ऑटो जोडी Earbuds उपयोगकर्ता पुस्तिका [XO-9568-3] प्रयोगकर्ता मैनुअल Essos TWS स्वत: पेयर Earbuds मोडेल: XO-9568-3 Essos ...
तीव्र छवि वायरलेस टिभी स्पीकर २०207072०XNUMX२ प्रयोगकर्ता मैन्युअल वायरलेस टिभी स्पीकर शार्प छवि, २०207072०XNUMX Thank धन्यवाद ...
अक्टोबर 18, 2020 अक्टोबर 18, 2020 पोस्टतीव्र छविटैग: तीव्र छवि, जीआरपी, XO-9656-2
अघिल्लो पोस्ट पछिल्लो पोस्ट:
तीव्र छवि DX-3 भिडियो ड्रोन प्रयोगकर्ता Manul
अर्को पोस्ट अर्को पोस्ट:
तीव्र छवि डुअल स्पिकर वरपर ध्वनि शावर प्रणाली उपयोगकर्ता मैन्युअल २० 206890 XNUMX ०
कुराकानीमा सामेल हुनुहोस्
करेन एच भन्छन्:
डिसेम्बर 27, 2020 12 मा: 08 हूँ
म मेरो आईफोन pair सँग जोडी गर्न सक्दिन
ईयरबडहरू मेरो ब्लुटुथ उपकरणहरूको सूचीमा देखा पर्दैन
डिसेम्बर 28, 20209मा: 01 हूँ
सेटिंग्समा केहि सेकेन्डको लागि तपाइँको ब्लुटुथ बन्द गर्न को लागी कोशिश गर्नुहोस् र फेरि पछाडि यो सूचीबद्ध जोडा बनाइएको ब्लुटुथ उपकरणहरूको तल पप अप हुनुपर्छ।
डिसेम्बर 28, 2020 12 मा: 30 बजे
मलाई पनि त्यस्तै भयो। यसैले मैले केसमा ईयरबडहरू राखें। जब म तिनीहरूलाई फेरि बाहिर निकालें, तिनीहरू मेरो ब्लुटुथ मेनूमा देखाए। राम्रो ध्वनि गुण!
ब्रायन एच भन्छन्:
जनवरी 5, 2021 8 मा: 06 बजे
कलहरू पेयर गरियो र म संगीत र युट्यूबमा मेरो फोनमा सुन्न सक्दछु, तर म मेरो फोन स्यामसंग ग्यालेक्सी एस on मा सुन्न सक्दिन। फोन अनुप्रयोगले ब्लुटुथ स is्लग्न गरिएको बताएको छ तर कलियों मार्फत केही छैन। विचारहरु?
जनवरी 7, 20217मा: 49 बजे
म यी ईयरबडहरुबाट केहि सुन्न सक्दिन।
जनवरी 10, 2021 8 मा: 47 बजे
कसैलाई थाहा छ यदि यी विन्डोको कम्प्युटरसँग पेयर गर्न सकिन्छ?
जनवरी 13, 20214मा: 52 बजे
रडने बी भन्छन्:
जनवरी 14, 2021 11 मा: 25 बजे
मेरो कान अंकुर अनियमित रूपमा बन्द र म तिनीहरूलाई स्पर्श नगरी संगीत शुरू। यो दुबै @ १ समय होइन तर दाँया वा बाँया हो। सहि सबैभन्दा खराब हो। किन मा कुनै विचारहरु?
जनवरी 23, 20217मा: 07 बजे
किन यो २० घण्टा जब ईयरबडहरू मात्र hours घण्टाको लागि हुन्छ?
लेवी क्षमा भन्छन्:
फेब्रुअरी 22, 2021 1 मा: 51 बजे
मलाई मेरो ईयरबड्स खराब खरीद हो जस्तो लाग्छ र फेरि तीखा छविबाट केहि पनि खरीद गर्ने छैन। तिनीहरूले शायद तीन पटक काम गरेका छन्।
मार्च 5, 20216मा: 04 हूँ
यदि तपाइँ ओभरचार्ज गर्नुहुन्छ के हुन्छ ??? कुज मैले सारा दिन मेरो चार्ज छोडिदिए र अब तिनीहरू खोल्दैनन्
अप्रिल 16, 2021 1 मा: 05 बजे
यी ईयरबडहरू धेरै राम्रो छैनन्। म तिनीहरूलाई चार्ज गर्न सक्छु, मेरो ल्यापटपमा जडान गर्नुहोस् र तिनीहरू १० मिनेटको लागि ठीक काम गर्दछन्। त्यसो भए, दाँया एक बन्द हुनेछ। म दाहिने इयरबडमा थिच्नुहोस् / समात्छु, यो seconds सेकेन्डमा फेरि फिर्ता हुन्छ ... सायद १ मिनेट को लागी राम्रो हुन्छ फेरि पावर अफ हुन्छ। मेरो ब्याट्री सूचक 10% चार्ज देखाउँदछ।
क्यारोल एम भन्छन्:
अप्रिल 17, 20213मा: 37 बजे
तपाईं भोल्युमलाई कसरी कम गर्नुहुन्छ? होइन, मेरो टिभी वा फायरस्टिकमा नियन्त्रणहरूले काम गर्दैन। अग्रिम धन्यवाद
XTREME B07J2QQM12 घुमाउने चार्ज उपयोगकर्ता पुस्तिका
XTREME B084RSCGPR 10000 mAh वायरलेस चार्जर पावर बैंक प्रयोगकर्ता पुस्तिका
हनीवेल REM1000R1003 वायरलेस प्रवेश स्थापना गाइड
यामाहा THR30IIA WL 30W वायरलेस ब्लूटूथ एम्पलीफायर ध्वनिक गिटार प्रयोगकर्ता गाइड को लागी सुन्नुहोस्
XTREME 53363209 RETRAX ब्लूटूथ फिर्ता लिन योग्य Earbuds हेडसेट प्रयोगकर्ता गाइड
व्यवस्थापक on प्यानासोनिक ब्लू-रे डिस्क प्लेयर मालिकको पुस्तिका
जिमी एनरिकेज on LOVENSE Lush3बुलेट भाइब्रेटर प्रयोगकर्ता म्यानुअल
ब्रेट एम क्यालिमन on स्यामसंग फ्रान्सेली डोरी फ्रिज पारिवारिक हब र बाह्य पानी र बरफ प्रबन्धक निर्देश पुस्तिकाको साथ
बोनी एबोर्न on TCL-4056L फ्लिप फोन प्रयोगकर्ता गाइड
Gianni on OMOTON किबोर्ड निर्देशनहरू